ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်ကို တွေ့ရစဉ်
ရခိုင့်တပ်တော် AA က လာမယ့် ၂၀၂၀ မှာ ရခိုင်ပြည်သူ့အာဏာပိုင် ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ULA/AA ကို အခွန်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။
တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက AA ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ အရင်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီး တပ်မတော်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ နယ်မြေဒေသလုံခြုံရေးအတွက် တပ်မတော်ရဲ့ တာဝန်နဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“သူတို့ပြောတဲ့ ပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ ဆိုတာလည်း အရင်တုန်းက တွေ့ရသလောက်ကတော့ သိပ်တော့လည်း ထူးထူးဆန်း မဟုတ်ဘူးဆိုသော်လည်း မြန်မာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ အာဏာတည်ဆောက်တဲ့နယ်မြေ ပေါ့၊ အဓိကကတော့ ဒါဘာလုပ်တာတုန်းဆိုတော့ အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ် မှုယန္တရားကို သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားနဲ့ အစားထိုးတာပဲ။ အာဏာ သိမ်းတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နှင်းရေး စစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အစိုးရရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ နယ်မြေဒေသလုံခြုံရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့က တပ်မတော်ရဲ့ တာဝန်နဲ့အညီ အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ရခိုင့်တပ်တော် AA ဟာ အတိတ်သမိုင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ရခိုင် ဘုရင့်နိုင်ငံတော် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် လွတ်လပ်ရေး ဒါမှ မဟုတ် ရခိုင်ပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့် တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ ကြားနာပွဲမှာ ထည့်သွင်းပြောဆို ထားပါတယ်။ အဲဒီလို ဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့် အရပ်သားပြည်သူတွေ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိနေကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
AA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ခိုင်သုခကတော့ ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကို ပြည်ထူထောင်လိုစိတ်ရှိတာဟာ တကယ်ရှိခဲ့တာကို မျှော်လင့်တာဖြစ်လို့ တရားနည်းလမ်းကျကြောင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့” ကို ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ အစိုးရ သဏ္ဍာန် စတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ RFA ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ပြောဆိုထားပါတယ်။
ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကို ၁၇၈၄ ခုနှစ်မှာ ဗမာအရှင်ဘုရင် ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းက တိုက်ခိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်ကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အမြင်ကို မေးမြန်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကတော့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ မူဘောင်ထဲမှာ ဆိုရင် သူတို့ရဲ့အဆိုကို လေ့လာဆွေးနွေးသွားဖို့ အသင့်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲနိုင်တဲ့ အနေအထားဆိုရင်တော့ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ မူဘောင်ထဲမှာ ဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ အဆိုပြုချက်တွေကို လေ့လာဆွေးနွေးဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်။ ဒီဘောင်ထက် ကျော်လွန်တဲ့ တောင်းဆိုမှုမျိုးဆိုရင်တော့ ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲနိုင်တဲ့ အနေ အထားရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒါဟာ လက်ခံလို့မရပါဘူး။”
AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခကတော့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ အာဏာရချိန်ကတည်းက လက်ရှိအချိန်အထိ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို သွားမယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြစရာမရှိသေးသလို တိုင်းရင်းသားတွေ ယုံကြည်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာမရှိသေးတာကြောင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“သူတို့ အာဏာရကတည်းက ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်အထိပြန်ပြီးတော့ ခြုံပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တကယ့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ဘာမှ ရေရေရာရာ ကိုင်ပြစရာ တစ်ခုမှမရှိသေးဘူး။ ထင်သာမြင်သာ ပြောလို့ရတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ULA/AA ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမိန့်ပေးထားတာရှိတယ်။ ဒီဟာတွေက နိုင်ငံတကာသိ ကြေညာထားတဲ့ ဟာဖြစ်တယ်။ အခုချိန်အထိ တိုင်းရင်းသားတွေ ယုံကြည်လာအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ မတွေ့ရသေးဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့လို ကျွန်တော်တို့က သူတို့ပြောနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတော်လေး သံသယရှိတာပေါ့ဗျာ။”
ရခိုင့်တပ်တော် AA အနေနဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနည်းတူ တပ်၊ ပါတီနဲ့ သူတို့ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ဒေသတွေရှိရင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့စည်းဖို့ လုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ဟောင်း၊ တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးမောင်မောင်စိုး က ပြောပါတယ်။
“လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဒေသတစ်ခုကို ထိန်းချုပ် နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ထူထောင်တာကတော့ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး။ ပြောမယ်ဆိုရင် AA မှ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ KIA လည်းလုပ်တာပဲလေ။ ဥပမာဆိုရင် KIO ဟာ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သလို KIA က စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ KIC ဟာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ AA ကျတော့ AA တပ်ကို စဖွဲ့တယ်။ နောက် ULA ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့တယ်။ အခု သူ့ဒေသတချို့ ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အခါမှာ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာပေါ့။ ကျန်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ တပ်ရှိတယ်၊ ပါတီရှိတယ်၊ သူတို့ ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့နယ်မြေ ရှိရင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းကြတယ်။ ဒီသဘောပါပဲ တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထက် ပိုထူးခြား တာတော့ မရှိပါဘူး။”
ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်သလို မညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ရင် ပြဿနာပိုဆိုးရွားလာပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ပိုမိုပြင်းထန်လာမယ်လို့ ဦးမောင်မောင်စိုးက ဆိုပါတယ်။
တိုက်ပွဲ အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒေသခံအများအပြားကလည်း AA ကို ထောက်ခံကြတယ်လို့ အကဲခတ်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို အစိုးရကလည်း သဘောပေါက်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်နေ့ အစိုးရ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ AA ကို ထောက်ခံနေတာတွေ ရပ်တန်းက ရပ်ဖို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင့်တပ်တော် AA တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း အမ်းနဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွေအထိ ကူးစက်လာနေတာပါ။
လက်ရှိအချိန်မှာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ကိုးသောင်းကျော်အထိ မြင့်တက်လာပြီး အရပ်သား ထိခိုက်သေဆုံးမှုဟာ တစ်ရာကျော်ထိ ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
A death wish by AA. An unfortunate chapter in Rakhine history. AA is only for AA. It has nothing good to offer .So far, many Rakhine children had died and maimed; many Rakhine family lives are disrupted; and the State is on it's way to further misery, and it's culture to oblivion once ARSA activity resurges..
Jan 08, 2020 10:17 PM